Nhasi ndirikunzwa kuda kusvirwa zviri serious, kusvikira atundira mukati mebeche rangu! - Masasi eHarare
DzeBonde Nhasi ndirikunzwa kuda kusvirwa zviri serious, kusvikira atundira mukati mebeche rangu!
Nhasi ndirikunzwa kuda kusvirwa zviri serious, kusvikira atundira mukati mebeche rangu!
Ndaishaya hope ndichingoshiringika, I’m not depressed or frustrated but muviri wangu urikunzwa kungoda kuiswa.Let me get straight to the point, ndiri lonely and ndirikuda kusvirwa serious.
Ndirikuda kuzvambarara on the bed ndakatarisa muma brown eyes ake ndichitambisa mboro yake ndobva ndatanga kuiyamwa. Ndirikuda kuti atange kundikisa zvinyoro nyoro kubva kumakumbo kusvikira atanga kundidya beche, obva atanga kundikoira nerurimi rwake for hours ndichingonzwa kunakirwa.
Ndirikuda kunzwa kuda kutunda ndichinzwa ma love juice angu achiwungana ndonzwa beche rangu rese ratota.
Ndirikuda kunzwa mboro yake ichinyura mukati mebeche rangu zvinyoro nyoro asingamire kusvikira ndanzwa yapinda deep ichirova chibereko changu. I want to feel the warmth yehuronyo hwake achitundira mukati mebeche rangu.
I want him to whisper my name munzeve dzangu achindikoira zvinesimba inini ndobva ndaita kusunga makumbo angu pamusana ndotambira huronyo hwese.
OMG!!! Man steals chicken & polony from HURE after s e x
ndirikunzwa kuda kusvirwa